News – The Ulwazi Programme
Umjaho wamahhashi-2022 Durban July
Ibhekwe ngabovu iDurban July ozobe ungempelasonto yangezi, 2 Julayi 2022 njengoba ishaya ibuya, isiqubulo salonyaka sithi ‘Show Me the Money’. Yize izikhukhula bezisho ukuhamba neTheku kodwa iTheku lithi selimi ngomumo ukusingatha lendumezulu yomcimbi. Umjaho omkhulukazi wamahhashi, ezemfashini kanye nobumnandi kubuye ngokuphelele selokhu kwaqala isifo se-Covid 19 emhlabeni. Ike yabhekana nobunzima iKwaZulu Natali kuleminyaka emibili eyedlule, … Read more
Categories News, People, Places Tags Durban July, Durban Municipality, Umjaho wamahhashi
Liyawohloka liyaphela iTheku
Ukuwohloka kwedolobha iTheku inkinga ebukeka iqhubekela phambili ukunokuba inqandwe. Izitolo ezinkulu zibalekela kuma shopping malls namabhizinisi athulela ezindaweni ezingaphandle kwedolobha okunomthelela ongemuhle. Kule siqeshana sibheka kafushane ukuwohloka kwedolobha iTheku okucace bha uma uhamba kuWest Street (Dr Pixley Kaseme Street) okuwumgwaqo osetshenziswa noma ophithizela kunayo yonke kuleli dolobha. Sikhula uma usedolobheni uWest street bekuyilapho obuthola khona … Read more
Categories News, Places Tags idolobha, iTheku
Abesifazane nezimo abebhekana nazo emshadweni
Ziningi izinto ebezenziwa phambilini ebezicindezela amalungelo abantu besifazane bese zibekwa njengamasiko. Amasiko nemikhuba sekwenziwe sengathi into eyodwa kanti akunjalo. Ukuveza umehluka nje kancane, isiko yinto elandelwa umphakathi wendawo thizeni noma isizwe esithile njengokulobola kumaZulu. Bese kuthi umkhuba yinto eyenziwa imizi ngokwehlukana kwayo njengokunqunywa icikicane uma ungowakwaNgubane. Uma ubhekisisa futhi ulandelela umlando imikhuba eyayicindezela abantu besifazane … Read more
Categories History, News Tags abesifazane, marriage, women rights
Eminyaka engu-157 lesitolo sabakhona sivala iminyango yaso unomphela. Kuthiwa okungapheli kuyahlola, lokhu kufakazelwa ilesi sitolo esidala kunathi sonke esiphilayo njengoba abaphathi baso bathe bavala nci ngokuphela kwenyanga. Lesi sitolokazi sinesitolo ezimbili ezinkulu eThekwini nase Thawini (Pietermaritzburg) kanye namagatsha amabili amancane eNyuvesi yaKwaZulu Natali kanye naseGoli. Ngemuva kokuhweba iminyaka, iziphathimandla zesitolo sezincwadi i-Adams bakhethe ukusidayisa ngenxa … Read more